Iji WordPress na gravity Forms weghara Nweta | Martech Zone
Iji ya WordPress dị ka usoro njikwa ọdịnaya gị mara mma n'oge a. Ọtụtụ saịtị ndị a mara mma mana ha enweghị usoro ọ bụla maka ijide ahịa inbound. Ndị ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ na-acha ọcha, ọmụmụ ihe, na iji okwu eme ihe n'ụzọ zuru oke na-enweghị njide ozi kọntaktị nke ndị folks na-ebudata ha.
Developzụlite websaịtị na nbudata enwere ike nweta site na ụdị ndebanye aha dị mma. Site na ijide ozi kọntaktị ma ọ bụ ikekwe ọbụna ịbanye na nkwukọrịta email na-aga n'ihu - ị na-eme ka onye ọrụ ahụ mara na enwere ike ịkpọtụrụ ha maka ozi kọntaktị ha.
Ọ bụrụ na ịnweghị iji WordPress, ịchọrọ iji ụdị gafee ọtụtụ nyiwe ma ọ bụ ọnọdụ, ma ọ bụ nwee mkpa dị elu, nkwanye m na-abụ mgbe niile Mpempe akwụkwọ. Ọ dị mfe iji, ntọlite, na itinye ya na agbanyeghị saịtị gị. Ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, ndọda Forms emeela ngwa mgbakwunye na-ewu ewu nke na-arụ ọrụ nke ọma iji weghara data.
Dị ndọda bụ ihe ịdọrọ na dobe ngwa mgbakwunye nke mepụtara maka WordPress. Ọ mepụtara nke ọma, nwere ọtụtụ mgbakwunye na njikọta, yana - kachasị mma - ọ na-echekwa nrubeisi ọ bụla n'ime WordPress. Ọtụtụ n'ime ụdị ngwaọrụ ndị ọzọ dị ebe ahụ na-agbanye data na adreesị ozi-e ma ọ bụ na mpụga. Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ịgafe data ahụ, ịnweghị ụdị nkwado ndabere ọ bụla.
Atụmatụ ike ndọda gụnyere
Mfe Iji, Fordị Dị Ike - Mee ngwa ngwa ma hazie ụdị WordPress gị site na iji nchịkọta ihe eji eme ihe ngosi. Họrọ ubi gị, hazie nhọrọ gị, ma jiri nwayọọ mepụta ụdị na saịtị WordPress gị nke nwere ike iji rụọ ọrụ.
30 + Dị njikere iji Ubi Formdị - vitydị ndọda na-eweta ọtụtụ ntinye ụdị ụdị ntinye na mkpịsị aka gị wee tụkwasị anyị obi, mkpịsị aka gị ga-ekele gị. Họrọ ma họrọ mpaghara ịchọrọ iji iji mfe iji ụdị nchịkọta akụkọ.
Mpaghara Ajọ Ọnọdụ - Ọnọdụ Logic na-enye gị ohere ịhazi ụdị gị iji gosi ma ọ bụ zoo mpaghara, ngalaba, ibe, ma ọ bụ ọbụlagodi bọtịnụ nyefere na nhọrọ ndị ọrụ. Nke a na - enye gị ohere ijikwa ozi ọ bụla a gwara onye ọrụ gị ka ọ nye na saịtị WordPress gị kwadoro ma mezie ụdị ahụ maka mkpa ha.
email Ịma Ọkwa - Agbalị ịnọgide na-eduga niile na-eduga site na gị na saịtị? Dị ndọda nwere email na-aza ajụjụ iji mee ka ị mara mgbe ọ bụla edepụtara akwụkwọ.
Njikwa faịlụ - Ọ dị mkpa ka ndị ọrụ gị nyefee akwụkwọ? Foto? Nke ahụ dị mfe. Naanị tinye mpaghara bulite faịlụ na ụdị gị ma chekwaa faịlụ ahụ na sava gị.
Chekwaa ma gaba - Yabụ ị mepụtara ụdị nke ọma na ọ nwere ike iwe obere oge iji mezue. Iji mpempe akwụkwọ, ị nwere ike ịhapụ ndị ọrụ gị ka hachekwaa ụdị nke edechara ma weghachite ya ma mechaa ya.
Ngụkọta oge - Dị ndọda abụghị ụdị ngwa mgbakwunye kwa ụbọchị… ọ bụ mgbakọ na mwepụ wiz kwa. Mee ngụkọta dị elu dabere na ụkpụrụ ụkpụrụ dị n'okpuru ma ju ndị enyi gị anya.
Mmekọrịta - MailChimp, PayPal, Stripe, Highrise, Akwụkwọ ọhụrụ, Dropbox, Zapier na ọtụtụ ndị ọzọ! Jikọta ụdị gị na ụdị ọrụ na ngwa dị iche iche.
ndọda Forms bụ ihe achọrọ maka saịtị WordPress ọ bụla. Anyị abụọ nwere mmekọ ma nwee ikikere mmepe ndụ niile!
Budata ụdị ikike ndọda
Tags: nwude nduformsụdị ndọdainbound marketingpluginWordPressụdị WordPresswordpress plugin
Ọkt 11, 2009 na 5:19 PM
Nnọọ vidiyo na-enye aka, Douglas. Mee ka ihe ahụ na-abịa.
Ọkt 26, 2009 na 7:46 PM
Ọ dị mma, dị mfe ma ọ nyeere nke a GravityForms ọhụrụ aka inweta ụdị izizi m ma na-agba ọsọ. http://bit.ly/4ANvzN
You na-enwe mmasị n'ike mmụọ nsọ? Yiri ka ọ na-agbakwụnye ọkwa nke "mgbagwoju anya" (ntụgharị karịa bọtịnụ) maka ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ… na ọ na-esiri ike ịnweta nkọwa w / o ya!
Aug 22, 2011 na 7:24 PM
Dị ndọda na WordPress bụ nnukwu ngwakọta. Have nwere aro ọ bụla maka izochi URL ahụ n'ezie na faịlụ nbudata ma gosipụta URL dị iche iche enwere ike iji naanị otu ugboro? Enwere ike iji ihe dị ka bit.ly mepụta njikọ nbudata otu oge? Ana m eche maka ojiji na nbudata zụrụ songs ma ọ bụ ndị ọzọ faịlụ na ị chọrọ ntakịrị nchebe na?
Aug 22, 2011 na 7:51 PM
Anaghị m ezobe ezigbo URL ahụ - m tinye njikọ na email nzaghachi ya mere ọ chọrọ ka ha nwee adreesị ozi-e ziri ezi. Ekwenyesiri m ike, na ụfọdụ obere koodu, ị nwere ike inye ha njikọ nke nwere hash nke bụ adreesị ozi-e ezoro ezo - mgbe ahụ ọ bụrụ na ha pịa ya, ị nwere ike ịhụ ma ebudatara ya ozugbo ma kwụsị onye ọ bụla ibudata ya.
Aug 22, 2011 na 8:10 PM
Ilegide anya maka ya ibudata ma wepụ ma ọ bụ gbanwee njikọ ahụ agaghị adị mma. Inwe ike iji ụdị URL dị mkpụmkpụ nke ngwa ọrụ iji mepụta ngwa ngwa na njikọ ezighi ezi ma soro onye ọrụ ga-arụ ọrụ oge akọwapụtara ga-abụ mgbakwunye dị mma.
Aug 22, 2011 na 8:37 PM
Ikwuru kpọmkwem ihe m mere. Nke ahụ bụ akụkụ 'nwere obere koodu'.
GSS Mgbasa ozi
tinye faili faili ma mepụta ebe nbudata dị mfe - ọ dịghị ihe ọzọ url
Mee 10, 2015 na 12: 13 AM
Ọ dịghị onye na-eji ụdị ndọda + mpempe akwụkwọ chimp mwepu na igbe dị ka popup / popover iji jide adreesị email maka akwụkwọ akụkọ? Achọpụtara m na saịtị a na-eji nsị eme ihe n'ezie ma na-achọ ụzọ iji nwee ọdịdị dị ka nsị na-enweghị ọnụahịa.
Anyị na-eji Mpempe Akwụkwọ ma mejuputa Mailchimp mana ị hụbeghị ihe ị na-achọ. Ekwenyere m - ọ ga - adị mma ịnweta ngwa ọrụ dị mfe ahụ! OptinMonster adịghịkwa oke njọ ma nwee ike ịhazi ya nke ukwuu.